एप्पलले शिकागोमा नयाँ एप्पल स्टोरको बत्तीहरू बन्द गर्ने निर्णय गर्दछ। बर्ड माइग्रेशनको कारण म म्याकबाट हुँ
एप्पलले शिकागोमा आफ्नो नयाँ एप्पल स्टोरको बत्तीहरू बन्द गर्ने निर्णय गर्दछ
प्रत्येक वर्ष, लाखौं चराहरू प्रत्येक मौसमको लागि खुवाउन राम्रो ठाउँ खोज्छन्। ग्रीष्म aतुमा तिनीहरू न्यानो ठाउँ खोज्छन् जहाँ उनीहरू पुन उत्पादन गर्न सक्दछन् र शरद approतु नजिक आउँदा तिनीहरू जाडो मौसममा राम्रोसँग खर्च गर्न अन्य क्षेत्रमा उड्दछन्। हाल चराहरूको यो लामो आन्दोलन ग्रहको धेरै भागहरूमा लिन्छ। अब यो संयुक्त राज्य अमेरिकाले पाउनु भएको सबै समस्याका लागि राम्रोसँग परिचित छ: यससँग धेरै अग्लो भवनहरू र चराहरू दुर्घटनाहरू छन् - र मृत्युहरू - बर्षको यस समयमा धेरै सामान्य छन्.
एप्पलले शिकागो नदीको किनारमा एप्पल मिशिगन एभिन्यूमा आफ्नो नयाँ स्टोरको ढोका खोल्यो। हामीलाई थाहा छ कि एप्पल स्टोरहरूले ठूला विन्डोजहरू समावेश गर्दछ जसको माध्यमबाट सूर्यको किरण बित्छ र कपर्टिनोमा भएका बिभिन्न उत्पादनहरूमा पुग्दछ। साथै, स्टोरहरू तिनीहरू सामान्यतया रातमा बत्तीहरू छोड्दछन् रात बटुवाहरूको लागि सुन्दर प्रकाशको पर्दाफास गर्दै।
यद्यपि, गत शुक्रवारदेखि, एप्पलले एसोसियसनका स्वयंसेवकहरूको अनुरोधको परिणामका रूपमा रातमा यसको स्टोरमा बत्तीहरू बन्द गर्ने निर्णय गरे «शिकागो बर्ड टक्कर निगरानी गर्दछ»। स्पष्ट रूपमा विगतका केही दिनमा, स्वयंसेवकहरूको समूहले स्टोरको वरिपरि बिभिन्न मृत वा बिग्रिएको चराहरू भेट्टाए। यसले केही प्रदर्शनहरू प्रभावकारी र पछि बसालेको छ एप्पलले आफ्नो स्टोर लाइटहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ प्रवास प्रवास समाप्त नभएसम्म.
यस्तो देखिन्छ, स्टोर एक महत्त्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रवास मार्गहरूमा ठीक स्थित छ। र विन्डोज संग टकराव एकदम सामान्य छ; चराहरू काँच हेर्न असमर्थ छन् र लामो यात्रा पछि शहरमा आराम गर्न चाहन्छन्। सबैभन्दा खराब पक्ष यो हो कि जब तिनीहरू हिंस्रक रूपमा टकराउँछन् र जमिनमा खस्छन्। यसैले शिकागो शहर को एक कार्यक्रम छ भनिन्छ «लाइट बाहिर', जसमा अग्लो भवनहरूका मालिकहरू बसाईरहेको बेला उनीहरूको बत्तीहरू तिर्न उत्साहित छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » हाम्रो बारेमा » एप्पलले शिकागोमा आफ्नो नयाँ एप्पल स्टोरको बत्तीहरू बन्द गर्ने निर्णय गर्दछ
आईफोन एक्स, म्याकोस बिटा and र,, म्याकहरू २०१4मा र अधिक धेरै सुरू गर्दै। म्याकबाट मा हप्ताको सर्वश्रेष्ठ
"क्यालिफोर्नियामा एप्पल द्वारा डिजाईन" पुस्तक अझै बिक्रीमा छ